စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန် TCDD YHT | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီဝယ်ရန် TCDD YHT စက်ယန္တရား
07 / 11 / 2019 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဂျော့ဘ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
TCDD YHT သည် Machinist ကိုငှားရမ်းမည်ဖြစ်သည် - TCDD သည် 262 ၀ န်ထမ်းခန့်အပ်မှုပြုလိမ့်မည်။ TCDD ၀ န်ထမ်းနေရာများကိုဖွင့်လှစ်ပြီး ၀ န်ထမ်းများဖြန့်ဝေခြင်းကို 5.Nov.2019 တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ တရားဝင်ပြန်တမ်းပြည်နယ်မီးရထားလမ်းထဲမှာထုတ်ဝေဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ပျင်းရိ 262 ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည်။
လက်ရှိတရားဝင်ပြန်တမ်းတွင်ထုတ်ဝေသောဆုံးဖြတ်ချက်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်အမိန့်ဥပဒေ (399) အရဆောင်ရွက်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အလုပ်ခန့်အပ်မည့် ၀ န်ထမ်းများ၏ရာထူးနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ၀ န်ထမ်းများ၏ရာထူး၊ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများ 657 ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသောရာထူးနှင့်ရာထူးများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း။
ထုတ်ဝေသောကြေငြာချက်တွင် TCDD၊ ဗဟိုနှင့်ပြည်နယ်၊ အထူးကျွမ်းကျင်သူ၊ စစ်ဆေးရေး၊ အတိုင်ပင်ခံ၊ အရာရှိ၊ ၀ န်ဆောင်မှုမန်နေဂျာ၊ မန်နေဂျာ၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ Wagon နည်းပညာရှင်၊
TCDD ၀ န်ထမ်းခန့်အပ်မှုဇယား
TCDD အလယ်ဗဟို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကျွမ်းကျင် 28
TCDD အလယ်ဗဟို စစ်ဆေးရေးအရာရှိ 1
TCDD အလယ်ဗဟို အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် 10
TCDD အလယ်ဗဟို စစ်ဗိုလ် 26
TCDD ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာ 3
TCDD ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော ညွှန်ကြားရေးမှူး 15
TCDD ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကျွမ်းကျင် 19
TCDD ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော Wagon Technician အ 120
TCDD ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာရှင် 18
TCDD ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော YHT အင်ဂျင်နီယာချုပ် 20
TCDD ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော စိတ်ပညာရှင် 2
တည်ထောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ၀ န်ထမ်းများအားခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ခွဲဝေချထားပေးသော ၀ န်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်။ စုဆောင်းမှုအသစ်နှင့်ပြည်တွင်းခန့်အပ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတိတိကျကျမသိရသေး။ ဆုံးဖြတ်ချက်အားအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားကြေငြာရန်အတွက် 2019 / 373 ကိုတရားဝင်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အဘယ်သူသည်စက်ပြင်သည်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးစက်လုပ်သမားဖြစ်လာရန်မည်သို့မေးခွန်းရဲ့အဖြေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသည်သို့မဟုတ်ကုန်တင်လျှပ်စစ်, ဒီဇယ်သို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့မီးရထားစက်ခေါင်းယာဉ်မောင်းတာဝန်များကိုသူသည်လူတစ်ဦးတင်ဆောင်လာသောစက်လုပ်သမား။
စက်ခေါင်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးလိုအပ်သောလုံခြုံမှုကိုတိုင်းတာသည်။ - စက်ခေါင်းကိုလည်ပတ်စေသည်။ ညွှန်ကိန်းနှင့်အခြားရထားလမ်းဝန်ထမ်းများမှအချက်ပြခြင်း၊ အချက်ပြခြင်း၊ အချက်ပြခြင်း၊ ရထား၏ရွေ့လျားမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ - ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသည့်အခါတွင်မှတ်တမ်းကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးသက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ (အဖြစ်အပျက်စာအုပ်စသည်ဖြင့်) ဖြည့်ပါ။
စက်ခေါင်းများ (ရေနွေးငွေ့၊ ဒီဇယ်၊ လျှပ်စစ်၊ ဒီဇယ် - လျှပ်စစ်)၊ - ရေဒီယို၊ - လှုပ်ရှားမှုမော်ဒယ်များ - ဝက်အူလှည့်ယာဉ်များ၊ ပလတ်စတစ်၊ လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ ကိရိယာအမျိုးမျိုး - ဖြစ်ပျက်မှုစာအုပ် (ပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာသောစာအုပ်) ။
REQUIRED အသက်မွေးမှု AS အင်္ဂါရပ်များ
စက်ပြင်ချင်သူ၊ - မျက်လုံးနှင့်ခြေထောက်များကိုညှိနှိုင်း။ အသုံးပြုနိုင်သည် - လှုံ့ဆော်မှုကိုလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်သည်။ - အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအရာများကိုများစွာရိပ်မိနိုင်သည်၊ နှင့်စက်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူသူတို့အား။
သူတို့အဆက်မပြတ်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးလယ်ပြင်၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောကြောင့်စက်လုပ်သမားသွားလာဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနေကြသည်။ စက်လုပ်သမားနေ့နှင့်ညဉ့, သူတို့ကတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်မှာအလုပ်မှာဖြစ်ရန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိုင်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းစီမံခန့်ခွဲဖို့ခညျြနှောငျနေကြသည်။ ခဲကရထားမတော်တဆမှုများကပြောသည်မရနိုင်ပါ။ အဆိုပါ dispatch, ရထားစပယ်ယာ, switchman နှင့်အင်ဂျင်ပြေးနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး၌ရှိကြ၏။
အလုပ်အကိုင်ဒြပ်စင်အဓိကအားဖြင့်သကြားစက်များ, သံမဏိစက်များနှင့်အတူတူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏, မြို့-ရထားလမ်းခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ တိုးပွားလာသည့်လူဦးရေမှာလည်းကအစုလိုက်အပြုံလိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာတတ်၏။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရှိဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာရထားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရထားလမ်းအားဖြင့်ကုန်စည်သို့မဟုတ်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလိုချင်သော level မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးဖွငျ့ဤဧရိယာထဲမှာကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအဓိကတိုက်ခိုက်မှု၏ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ခေတ်မီဖို့ရထားလမ်းနှင့်နည်းလမ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးအလုပ်စက်လုပ်သမားကိုဆိုလိုသည်။
စက်ပြင်သင်တန်းကိုတူရကီနိုင်ငံမီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်သင်တန်းကျောင်းများ၌ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်စက်မှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအထက်တန်းကျောင်းများ၏ဘွဲ့ရများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်သင်တန်းများဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။
အနည်းဆုံးမူလတန်းကျောင်းဘွဲ့ရများသည်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပညာရေးအတွက်လိုအပ်သည်။ - ထို့အပြင် TCDD ဆေးရုံများမှကောင်းမွန်သောကော်မတီအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။
အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းပေးခြင်း TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏အလုပ်အကိုင်ခုနှစ်တွင်; သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရဘို့ TCDD 18 လ, သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရနှစ်ပေါင်း3ရန်။ အဆိုပါအသက်မွေးမှုအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရလည်း, TCDD ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအတွင်း In-ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းနှင့်သင်တန်းများအတွက်ပါဝင်အားဖြင့်လည်းအခွင့်အလမ်းစက်လုပ်သမားရှိစေခြင်းငှါ, ထိုစက်လုပ်သမားလက်ထောက်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်သူမြားအားဖြင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ ဒီသီအိုရီအလုပျအတှကျ3လ, လည်းအလုပ်ပြုသောအမှုကြောင့်စက်လုပ်သမားလေ့ကျင့်ရေးကိုကူညီရန်အတွက်မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်အားလက်ခံတွေ့ဆုံအထိပါပဲ။ စက်ပြင်ရဲ့လိုင်စင်စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အလုပ်သင်ရဲ့အဆုံးမှာကျင်းပလိမ့်မည်ရှောက်သွားသောသူတို့အဖို့ထုတ်ပေးသည်။
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းမကြာသေးမီကဘွဲ့ရ TCDD အသက်မွေးမှုအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရပွင့်လင်းစာမေးပွဲနှင့်အတူလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဘွဲ့ရလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ဖို့။ In-ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းအချို့ကာလပြီးနောက်သူတို့စက်လုပ်သမားခေါင်းစဉ်လက်ခံရရှိသည်။ စက်ပြင်အဖြစ်ဒီပလိုမာ (Brove) ဒေသများခေါင်းကိုစက်ပြင်မှတဆင့်သင်တန်းကိုဆက်လက်စေသော။
Scholarship, ချေးငွေနှင့်, PRICE ခန့်မှန်းချက်
အဆိုပါ In-ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း, သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရဥပဒေအမှတ် 657 ပေးထားနေသောလူထုအခြေပြုကျေးကျွန်အတွင်းလုပ် TCDD အတိုင်းအတာနှင့်ဇာတ်စင်များအတွက်လစဉ်ကြေးကြိုတင်ခန့်မှန်း။ အမြဲတမ်းန်ထမ်းများ၏တာဝနျကိုတစ်စက်ပြင်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်တစ်စုစုပေါင်းလစဉ်ကြေးနှင့်အတူ staffed အထူးလျော်ကြေးအဖြစ်ခန့်အပ် လုပ်.2ကြိမ်လှည့်ပတ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခကိုလက်ခံရရှိသူကိုစာချုပ်န်ထမ်းများ၏ပုံစံအတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကန်ထရိုက်ဝန်ထမ်း 4-5 ကြိမ်ကနေအသားတင်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအထိပမာဏအတွက်လစဉ်ကြေးလက်ခံရရှိသည်။
TCDD ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများစက်လုပ်သမားဝယ်ယူ Make မှ
73 စက်လုပ်သမား၏ဝယ်ယူ Make မှ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး!
ဝန်ထမ်းရေးရာကြေညာချက်များအဘို့အ TCDD စက်လုပ်သမားသင်တန်းအမှတ်စဥ်
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမသန်စွမ်းမှု၊ ပြစ်မှုထင်ရှားသူများနှင့်အလုပ်သမားများ…
အဆိုပါ YHT စက်လုပ်သမားထံမှဒဏ်ရာရရှိအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူပထမဦးဆုံးအကြိမ်မတော်တဆများအတွက်တိုက်တွန်း
2 စက်ပြင်ဆရာ Bilecik ရှိ YHT လိုင်းပေါ်တွင်ရထားမတော်တဆမှု…
ပို့ဆောင်ရေး TCDD စက်လုပ်သမားသင်တန်းအမှတ်စဥ်ဖွင့်လှစ်ဘို့ပွုစုပြိုးထော
TCDD စက်လုပ်သမားလစာဘယ်လောက် 2018
ကြေညာလိုက်သည် TCDD ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများစက်လုပ်သမားခံတွင်းစာမေးပွဲရလဒ်များ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: DE စက်ခေါင်း 24000 အမျိုးအစားစက်လုပ်သမား ...
တင်ဒါအသိပေးချက် - ပင်လယ်ကွေ့ရှိ4စက်ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်များ
တင်ဒါအသိပေးချက် - ပင်လယ်ကွေ့ရှိ4စက်လုပ်သမားများ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: DE 24000 type ကိုခေါငျး ...
တင်ဒါအသိပေးချက် - Level Crossing ရှိစက်ပြင်သတိပေးစနစ်…
ဧည့်ခံမှာ TCDD န်ထမ်းများ
TCDD ၀ န်ထမ်းခန့်အပ်မှု
TCDD YHT စက်ယန္တရားသမားခန့်အပ်မှု